माथि उठाउनका लागि समय | Flammor - profetisk tidskrift
माथि उठाउनका लागि समय
त्यहाँ एक आध्यात्मिक Awakening छ भने, यो नराम्ररी समाप्त हुनेछ।
आध्यात्मिक Awakening, आध्यात्मिक निदाउरोपन को विपरीत। यो ताजा स्थिति भइरहेको छ के थाह छ, एउटा ठूलो खतरा छ र कुनै contingency छ।
एक वास्तविक खतरा को आध्यात्मिक निदाउनु येशूले सिकाउँछ भन्ने कुरा छ। उहाँले पनि यो उहाँले आउँछ बस अघि विश्वासीहरूमा हुनेछ भनेर देखाउँछ। यो मत्ती मा येशूको शिक्षा मा वर्णन गरिएको छ। 25
दृष्टान्तमा धेरै यो निदाउरोपनको को खतरा बुझ्न तर गरिब तयारी बस्थे गर्नुभयो। एउटै हाम्रो समयमा साँचो छ र तिनीहरूले सुतिरहेको छ भने सुतेको आध्यात्मिक भएकाहरूलाई थाहा छैन। तिनीहरूले जागा छन् अरूले ल्याए गर्न आवश्यक छ।
तपाईं मसीही जागा छन् र येशूको कुनै पनि समय आउन सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्न - के तपाईं अरूलाई ल्याउन सक्छन् के - यी कि लागि अनन्तकालसम्म कृतज्ञ हुन सक्छ!
Awakening सञ्चार लागि उपकरण मसीही पुस्तक दिन हुन सक्छ। अब हामी Holger Nilsson द्वारा उठ्नु मा पुस्तक समय एक अभूतपूर्व प्रस्ताव छ। हामी 10 प्रतिहरू बेच्न 100: -! यो एक पत्रिका को मूल्य भन्दा लामो छ!
यो पुस्तक घरमा खरीद मा पारित। तपाईं 20 पीसी तपाईं चाहनुहुन्छ भने धेरै पुस्तक प्याकेजहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। 200: - 30 पीसी। 300: - र यति मा। रेकर्ड नीलो झोला लागि दर्जन पुस्तकहरू प्रति - ढुवानी शुल्क 45 थपिनेछ। साथीहरूको र यति अब किन्न चर्चमा साझेदारी।
पोस्ट रकम उदाहरण 145: - 0. भुक्तानकर्ता Antikvariatet, स्टकहोम - 10 पीजी 36 64 81 मा प्रतिहरू।
तल पुस्तक मा अध्याय शीर्षकहरू छ:
1 समय सजग
3 कठिन समयमा
हाम्रो समय को4एक प्रतिबिम्ब
5 समय अनजान
हाम्रो समय को6preoccupation
7 अपशिष्ट पटक
समय को 8 बुझ्नका
येशूको फिर्ती अघि9समय
समयमा 10 सतर्कता